Cryptsy Points စျေး - အွန်လိုင်း POINTS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Cryptsy Points (POINTS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Cryptsy Points (POINTS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Cryptsy Points ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Cryptsy Points တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Cryptsy Points များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Cryptsy PointsPOINTS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$86.06Cryptsy PointsPOINTS သို့ ယူရိုEUR€72.47Cryptsy PointsPOINTS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£65.44Cryptsy PointsPOINTS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.78.34Cryptsy PointsPOINTS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr771.97Cryptsy PointsPOINTS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.539.97Cryptsy PointsPOINTS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1907.14Cryptsy PointsPOINTS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł320.27Cryptsy PointsPOINTS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$114.37Cryptsy PointsPOINTS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$118.95Cryptsy PointsPOINTS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1925.25Cryptsy PointsPOINTS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$666.98Cryptsy PointsPOINTS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$460.32Cryptsy PointsPOINTS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹6452.46Cryptsy PointsPOINTS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.14514.29Cryptsy PointsPOINTS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$117.83Cryptsy PointsPOINTS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$128.91Cryptsy PointsPOINTS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2677.03Cryptsy PointsPOINTS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥598.41Cryptsy PointsPOINTS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥9086.03Cryptsy PointsPOINTS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩101946.21Cryptsy PointsPOINTS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦32745.27Cryptsy PointsPOINTS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽6319.44Cryptsy PointsPOINTS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2384.84
Cryptsy PointsPOINTS သို့ BitcoinBTC0.00726 Cryptsy PointsPOINTS သို့ EthereumETH0.217 Cryptsy PointsPOINTS သို့ LitecoinLTC1.44 Cryptsy PointsPOINTS သို့ DigitalCashDASH0.847 Cryptsy PointsPOINTS သို့ MoneroXMR0.918 Cryptsy PointsPOINTS သို့ NxtNXT6103.27 Cryptsy PointsPOINTS သို့ Ethereum ClassicETC12.01 Cryptsy PointsPOINTS သို့ DogecoinDOGE23985.37 Cryptsy PointsPOINTS သို့ ZCashZEC0.869 Cryptsy PointsPOINTS သို့ BitsharesBTS3284.85 Cryptsy PointsPOINTS သို့ DigiByteDGB3139.41 Cryptsy PointsPOINTS သို့ RippleXRP279.26 Cryptsy PointsPOINTS သို့ BitcoinDarkBTCD2.89 Cryptsy PointsPOINTS သို့ PeerCoinPPC296.9 Cryptsy PointsPOINTS သို့ CraigsCoinCRAIG38210.84 Cryptsy PointsPOINTS သို့ BitstakeXBS3576.59 Cryptsy PointsPOINTS သို့ PayCoinXPY1463.86 Cryptsy PointsPOINTS သို့ ProsperCoinPRC10524.1 Cryptsy PointsPOINTS သို့ YbCoinYBC0.0451 Cryptsy PointsPOINTS သို့ DarkKushDANK26888.98 Cryptsy PointsPOINTS သို့ GiveCoinGIVE181499.14 Cryptsy PointsPOINTS သို့ KoboCoinKOBO18814.11 Cryptsy PointsPOINTS သို့ DarkTokenDT79.27 Cryptsy PointsPOINTS သို့ CETUS CoinCETI241998.28
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 06 Aug 2020 19:00:01 +0000.